Maitiro Ekugadzirisa peji reKutsvaga Kwenharaunda | Martech Zone
Chitatu, October 17, 2012 Svondo, October 21, 2012 Douglas Karr
Mune yakateedzana nhevedzano yekugadzirisa yako saiti kushambadzira kwakawanda, isu taida kupa kuputsika kwemaitiro ekuvandudza peji kuti riwanikwe zvemuno kana zvemukati zvemukati. Injini dzekutsvaga seGoogle neBing dzinoita basa rakakura rekutora mapeji akanangana nenzvimbo, asi pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kuti uone peji rako remunharaunda rakanyorerwa zvakanaka kumatunhu akakodzera uye nemazwi akakosha kana mitsara.
Kutsvaga kwemuno HUGE… ine chikamu chakakura chese tsvagurudzo dziri kuiswa neshoko rinobatanidzwa renzvimbo yemunhu ari kutsvaga. Makambani mazhinji anorasikirwa nemukana iwoyo yemunharaunda yekutsvaga optimization inopa nekuti vanonzwa kuti kambani yavo haisi zvomunharaunda… Ndeyenyika kana yepasi rose. Dambudziko, chokwadika, nderekuti nepo ivo vasingazvione sevanzvimbo, avo vangangove vatengi vari kutsvaga munzvimbo.
Peji Musoro - Parutivi, chinhu chakakosha pane peji rako ndicho chinyorwa chezita. Dzidza maitiro gadziridza ma tag ako emazita uye iwe uchawedzera chinhanho uye tinya-kuburikidza chiyero kune ako blog mablog mune yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs) zvakanyanya. Sanganisira zvese musoro wenyaya nenzvimbo asi chengeta pasi pemavara makumi manomwe. Ive neshuwa yekuisawo yakasimba meta tsananguro yeiyo peji - pasi pegumi nematanhatu mavara.
URL - Kuva neguta, nyika kana dunhu muURL yako kunopa injini yekutsvaga ine chaiyo nzvimbo iyo peji iri nezve. Ichowo chiyeuchidzo chakakura chevashandisi veinjini yekutsvaga pamwe nekuti ivo vari kuongorora zvimwe zvinotsvaga enjini yekutsvaga peji.
musoro wenyaya - Wako optimized zita inofanira kupa kiyi yakakosha zita reruzhinji pamwe nenzvimbo yepakati yenzvimbo urikuyedza kuigadzirisira kwekutanga, wobva watevera neyako geographic ruzivo. Ive neshuwa yekuisa yakasimba meta tsananguro yeiyo peji - pasi pegumi nematanhatu mavara.
Yemunharaunda SEO Services | Indianapolis, Indiana
Social Sharing - Kugonesa mushanyi wako kuti auye agovane peji rako inzira huru yekuita kuti ikwidziridzwe mukati memharaunda dzinodiwa.
mepu - Kunyange mepu isiri kukambawa (inogona kunge iine KML), kuva nemepu papeji rako inzira huru yekupa ruzivo rwevashandisi vako kuti vakuwane.
mirayiro inowedzerwa kuwedzera uye inogona kuitiswa zviri nyore neGoogle Mepu API. Ita shuwa kuti rako bhizinesi rakanyorwa mumabhizinesi madhairekitori e Google+ uye Bing nenzvimbo chaiyo yenzvimbo yakatarwa mune rako bhizinesi chimiro.
adhiresi - Ive neshuwa yekuisa yako yakazara yekutumira kero mune izvo zviri mukati peji.
Images - Kuwedzera chifananidzo nenzvimbo yemuno kuitira kuti vanhu vazive nzvimbo yacho inonakidza, uye kuwedzera iyo tag tag ine iyo chaiyo nzvimbo yakakosha. Mifananidzo inokwezva vanhu uye inokwezvawo kutsvaga kwemifananidzo… iyo alt tag inowedzera mukushandiswa kweshoko renyika.
Geographic info - Zviratidzo, mazita ekuvaka, migwagwa yemuchinjikwa, machechi, zvikoro, nharaunda, maresitorendi ari padyo - ese aya mazwi mazwi akapfuma aunogona kusanganisira mumuviri wepeji kuti unyore uye uwane nzvimbo iyo peji rako iri yakagadzirirwa kuti. Usangozvisiyira kune rimwe chete dunhu kiyi kiyi. Vanhu vazhinji vanotsvaga vachishandisa nzira dzakasiyana dzemuno.
famba - Nguva zhinji vashanyi vari kuyedza kukuwana iwe, ivo vari kuyedza kuzviita pane chishandiso chemuno. Ive neshuwa une inoshanda mbozhanhare yekutarisa yako yemuno peji rekutsvaga kuti vashanyi vese vakwanise kukuwana iwe kana kuwana nzira kwauri.
Tags: bing bhizinesi repakatiGeoGeographic optimizationgeographic seogoogle nzvimbooptimization yemunolocal searchyemuno seonzvimbonzvimbo inemap
Gumiguru 18, 2012 pa 1:26 AM
Nzvimbo yako inogona kutibatsira zvakanyanya sezvo tiri kunanga vatengi veko kubva kuMelbourne nharaunda yeAustralia. Ikozvino ini ndinogona kuwana zano rekugadzirisa webhusaiti yangu kune vateereri veko.
Gumiguru 18, 2012 na6: 10 PM
Saka urikutsanangura kugadzira peji rekumhara rewebhusaiti yako, rakaparadzana nepeji remba, iro rakagadziridzwa kutsvaga kwenzvimbo? Ndiri kufungidzira kuti hazvingave zvine hungwaru kugadzira akawanda emapeji ekumhara aya emaguta akatenderedza (ndiri kuita internet marketing yekambani yedenga inoita nezve 5 maguta akapoteredza)?
Ndatenda! Great content.
Gumiguru 20, 2012 na2: 09 PM
Ndatenda @disqus_hIZRrUgZgM:disqus. Unogona kuenda pamusoro nemapeji ekumhara akakwenenzverwa munharaunda. Handina chokwadi chekuti ndaizova neiyo yega yega yenzvimbo yandiri kuedza kukwezva, asi ndaizova nematunhu akakosha. Saka, sekambani yeinishuwarenzi yenyika, ndingangove nemapeji enzvimbo imwe neimwe yeguta guru… asi kwete maguta ese. Iwe unofanirwa kunge uine zvakakwana zvemukati mune yega yega kuti uzvitsaure kubva kune inotevera. Mumuenzaniso wako, ndinogona kunge ndine mapeji mashanu akasiyana - rimwe rakagadziridzwa kuguta rega rega.